Uyilo - Imagazini yoyilo
Ikomityi Yekofu Kunye Nesosi
Ikomityi Yekofu Kunye Nesosi Ukuphatha ukutya okunexabiso eliphakathi kwicala lekofu kuyinxalenye yeenkcubeko ezahlukeneyo njengoko kulisiko ukunikela ngendebe yekofu kunye nolonwabo lwaseTurkey eTurkey, ibhiscotti e-Itali, churros eSpain kunye nemihla e-Arabia. Nangona kunjalo, kwisosi eqhelekileyo esi siphatha ikomityi yekofu eshushu kwaye sinamathele okanye simanzi kukuchitheka kwekhofi. Ukuthintela oku, le ndebe yekofu ine-saucer enezinambatho ezinikezelweyo ezigcina ukugcinwa kwekofu kwindawo yayo. Kuba ikofu yenye yeziselo ezishushu zequintessential, ukuphucula umgangatho wamava okusela ikofu kubalulekile ngokubhekisele kubomi bemihla ngemihla.
Itafile I-Codependent melds psychology kunye noyilo, egxile ikakhulu ekubonakalisweni komzimba kwimeko yengqondo, ukuxhomekeka kwekhowudi. Ezi tafile zimbini zidityanisiweyo kufuneka zixhomekeke komnye nomnye ekusebenzeni. Ezi fomu zimbini azinakho ukuma zodwa, kodwa zidibene zenze enye indlela yokusebenza. Itheyibhile yokugqibela ngumzekelo onamandla kuyo yonke into enkulu kunexabiso lamalungu ayo.
I-Cutlery Iseti ye-Ingrede cutlery yenzelwe ukubonisa imfuno yokugqibelela kubomi bemihla ngemihla. Iseti lwemfoloko, isipuni kunye nesitshixo kunye I-cutlery imile ngokuthe nkqo kwaye iyila ukuvumelana etafileni. Imilo yezibalo ivumelekile ukuba yakha enye yefomathi eneziqwenga ezintathu ezahlukeneyo. Le ndlela idala amathuba amatsha anokusetyenziselwa iimveliso ezininzi ezahlukeneyo ezinje ngetafileware kunye nezinye izixhobo zoyilo.
Ileta Evulekileyo Zonke ziqala ngombulelo. Ungcelele lweencwadi ezivulayo ezibonisa imisebenzi: UMemento ayisiyo nje isixhobo kodwa uludwe lwezinto ezibonisa umbulelo kunye neemvakalelo zomsebenzisi. Ngomxholo wemveliso kunye nemifanekiso elula yobungcali obahlukeneyo, uyilo kunye neendlela ezizodwa kwisiqwenga ngasinye seMemento sisetyenziselwa ukunika umsebenzisi amava ahlukileyo entliziyweni.
Isitulo Esinengca Ngokukhawuleza u-Osker ukumema ukuba uhlale kwaye uphumle. Esi situlo sengalo sinolwakhiwo olubonakalayo nolugobile kakhulu olubonelela ngeempawu ezizodwa ezinje ngokuhlanganisa iiplanga zokudibanisa izixhobo, iingalo zesikhumba kunye nokuhombisa. Iinkcukacha ezininzi kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezisemgangathweni ophezulu: isikhumba kunye neenkuni eziqinileyo ziqinisekisa uyilo lwangoku kunye nexesha.
Ifanitshala Yesitya Sokuhlambela
Ifanitshala Yesitya Sokuhlambela Ukuphefumlelwa koyilo kwakuvela kuyilo oluncinci kwaye kusetyenziswe njengento ethuleyo kodwa ehlaziyayo kwindawo yokuhlambela. Ivele kuphando lweefomathi zobunjineli kunye nevolumu yejometri elula. Isiseko sisenokuba yinto enokuthi ichaze izithuba ezahlukeneyo ngeenxa zonke kwaye kwangaxeshanye iziko kwindawo. Kulula ukuyisebenzisa, icocekile kwaye ihlala ixesha elide. Kukho ukwahluka okuhlukeneyo kubandakanya ukuma wedwa, ukuhlala ebhentshini kunye nodonga oluxhonywe phezulu, kunye nokutshixwa okukodwa okanye kabini. Umahluko kumbala (imibala yeRAL) uya kunceda ukudibanisa uyilo kwisithuba.
Memento Ileta Evulekileyo Saturday 25 September
Exxeo Ipiyano Ye-Hybrid Egudileyo Friday 24 September
Phuket VIP Mercury Iofisi Thursday 23 September
Yila udliwanondlebe losuku Saturday 25 September
Yila intsomi yosuku Friday 24 September
Uyilo losuku Thursday 23 September
Umyili wosuku Wednesday 22 September
Iqela loyilo losuku Tuesday 21 September
Ikomityi Yekofu Kunye Nesosi Itafile I-Cutlery Ileta Evulekileyo Isitulo Esinengca Ifanitshala Yesitya Sokuhlambela